Lalao « Kapsilinaka » : Lasan’i Toliara ilay fiara faharoa -
AccueilVaovao SamihafaLalao « Kapsilinaka » : Lasan’i Toliara ilay fiara faharoa
Lalao « Kapsilinaka » : Lasan’i Toliara ilay fiara faharoa
Nifarana omaly rehefa naharitra roa volana. Tontosa omaly tetsy amin’ny foiben’ny Star tetsy Andraharo ny dingana farany tamin’ilay lalao niarahan’ny Telma sy ny zava-pisotro fresh. Taorian’ny fisarihana, lasan’i Toliara ilay fiara vaovao faharoa, loka lehibe tamin’io lalao io. Ny mpanjifa, Albert Fanoel Paul no nahazo ilay fiara faharoa, raha Rakotomalala Hajaina no nahazo ny fiara voalohany taorian’ny fisarihana voalohany. Ankoatra ireo fiara ireo dia mpanjifa 5 hafa ihany koa no nahazo loka toa ny fahitalavitra fisaka, scooter, finday…
Manodidina ny 230 000 ny isan’ireo kapsily nilalaovana tamin’ity lalao ity, ary ankoatra ireo loka lehibe ireo dia samy nahazo ny lokany avokoa ireo mpilalao tsirairay toa ny « datas », antso maimaimpoana, hafatra fohy…
Nandritra ny roa volana naharetan’ny lalao dia mpanjifa 28 no nahazo ireo loka lehibe tamin’ireo fisarihana 5 natao isaka ny tapa-bolana ; Nitentina 800 Tapitrisa Ariary ny loka nozaraina nandritra izay fotoana izay.
Ankoatrany France 24 dia ny gazety l’express.fr ao Frantsa indray no namoaka ny fanadihadiana vitany mikasika ny raharaha Mamy Ravatomanga, izay mpanolotsaina manokan’i Andry Rajoelina. Hisarihan’izy ireo ny mpamaky tamin’ny vaovao izay nivoaka ny faha- ...Tohiny